६ तरिका, आफैलाई माया गर्न सिकौं - Nagarik Today
होम » ६ तरिका, आफैलाई माया गर्न सिकौं
६ तरिका, आफैलाई माया गर्न सिकौं
अरूलाई धन्यवादु भन्न तपाईंले सानै उमेरमा सिक्नु भएको कुरा हो। तर तपाईं कति पटक आफैँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ ? आफ्नै शरीरलाई धन्यवाद भन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो जुन तपाईं सहजै गर्न सक्नुहुन्छ । विशेष गरी जब तपाईं आत्म-प्रेम र कल्याणको जीवन बिताइरहनु भएको छ भने यो झनै महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यो बानीका कारण हुने होइन । जुन स्वाभाविक रूपमा आउँछ समाज लगातार हामीलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्न लगाउँछ ।
हामी समाजका अपेक्षाहरुलाई परिवर्तन गरेर यसको सम्पूर्णतामा शरीरलाई स्वीकार गरेर जीवनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यहाँ त्यही विषयलाई उठाइँदैछ जहाँ आत्म प्रेम र कल्याण प्राप्त गर्न सकियोस् । यी विधिहरु अपनाएर, तपाईं आफ्नो शरीरलाई पूरापुर स्वीकार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
ध्यान आफूलाई आफैँमा केन्द्रित गर्ने एक सुन्दर तरिका हो। जब जीवन तनावपूर्ण हुन्छ वा तपाईंको दिमाग दौडिरहेको हुन्छ, तपाईं सधैं ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सबैका लागि सुलभ छ किनकि तपाईं यसलाई जहाँकाहीं पनि गर्न सकिन्छ । यसको लागि एक शान्त, आरामदायक ठाउँको आवश्यक पर्छ ।
ध्यानले तपाईंलाई विश्राम र सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ। जब तपाईं हरेक दिन दिमाग शान्त गर्नका लागि समर्पित हुनुहुन्छ । जसको लागि सजिलो तरिका भनेको ध्यान नै हो ।
२. माइण्डफूल मुभमेन्ट
ध्यान र व्यायाममा धेरै फरक हुँदाहुँदै पनि यसबीच केही सम्बन्ध पनि छ । ध्यानसँगै तपाईंको शरीरलाई सामान्य हलचल गराउनु भयो भने यसले शान्त मनलाई पूरा गर्न योगदान पुर्‍याउँछ ।
शरीर हलचल गराउने पनि धेरै विधिहरू हुन्छन् । जस्तै, कुकुरसँग खेल्नु, यताउता हिँडडुल गर्नु, रूखहरू रोप्नु जस्ता कामले पनि शरीरको स्वच्छतासँगै मन हल्का बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।
अभ्यास एक यस्तो तरिका हो कि जसले तपाईंको शरीर र तपाईंको दिमागलाई राम्रो मोडमा राख्न मद्धत गर्ने गर्छ ।
३. राम्रा किताबहरु पढ्नुहोस्
जब तपाईं पहिलो पटक आत्म-प्रेमको तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा हुँदैन कि यसको मतलब के हो। तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि अरु कसैलाई माया गर्नु ठीक हो । तर आफैंलाई मैले कसरी माया गरुँ रु
व्यक्तिगत आत्मप्रेमको यात्रामा योग कक्षासँगै पुस्तकालय पनि धाउन सुरु गर्नुहोस् । यो पुस्तकालय पुस्तकको गोदाममा मात्र भेटिँदैन । यो त कहिले रूखको आसपास होस् वा घरपालुवा जनावरको नजिक पनि पाउन सकिन्छ । यो प्रकृति नै एउटा उत्कृष्ट पुस्तकालय हो ।
४. आफूलाई खुशीले घेर्नुहोस्
शान्त रहनको लागि सबैभन्दा पहिले हामी आफूले आफैँलाई खुशीले बेर्नु पर्छ । खुसी जेमा पनि खोज्न सकिन्छ । तर हामी चिन्तामा भन्दा धेरै खुसीमा बाँच्न सिक्नुहोस् ।
तपाईंको वरपर रहेका मनपर्ने चीजहरु संकलन गर्नुहोस् । यी ताजा फूलहरु हुन् या सकारात्मक सन्देशहरु नै किन नहुन् । जुनसुकै मनपर्ने चिजले पनि तपाईंमा खुसी भेट्न सक्छ ।
५ मद्दतको लागि सोध्नुहोस्
आत्म-प्रेम मद्दत मागिरहेको छ। जब तपाईं एक कठिन समयमा पुग्नुहुन्छ कि तपाईंले आफैँमाथि प्रेम भाव जनाउनुहुन्छ भने धेरैले तपाईंलाई पागल सम्झन सक्छन् । जस्तो तपाईं ऐनामा हेरेर आफूले आफैँलाई आई लभ यु भन्नु हुन्छ भने तपाईंलाई देख्नेले तपाईंलाई राम्रो मान्दैनन् ।
ठीक नहुनु पनि ठीक हो । कुरा यो हो कि तपाईं यो यात्रामा एक्लै दौडनु पर्दैन । तपाईंलाई जुन सहायताको आवश्यकता छ त्यसको बारेमा सोध्नु एक उपहार हो । जुन उपहार तपाईं आफूले आफैँलाई दिन सक्नुहुने छ ।
६ .मिरर वर्क
पहिले शर्त गरौं कि तपाईं हरेक दिन आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु हुनेछ । यो धेरै मानिसका लागि नकारात्मक अनुभव हुन सक्छ । किनकि कठोर आन्तरिक संवाद गर्न ऐना हेरेपछि सुरु हुन्छ । हरेक दिन ऐनामा हेरेर भन्नुहोस् कि म तिमीलाई माया गर्छु । जसले तपाईं आफ्नै शरीरलाई हरेक दिन दयालु र मायालु भाव देख्न सक्नुहुनेछ ।
आफैलाई माया गर्न सिकौं